June 7, 2020 - Khitalin Media
၂၀၂၀ ဇွန်လ (၈)ရက်မှ ၊ (၁၅)ရက်အတွင်း ဆောင်ရန် ၊ ရှောင်ရန် ၊ သတိပြုရန် ၊ ယတြာပြုရန်
June 7, 2020 Khitalin Media 0
မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက် ၂၀၂၀ ဇွန်လ (၈)ရက်မှ ၊ (၁၅)ရက်အတွင်း ဆောင်ရန် ၊ ရှောင်ရန် ၊ သတိပြုရန် ၊ ယတြာပြုရန် (၁)ပတ်စာ ဟောစာတမ်း အကျွန်ုပ်၏ ဣဌသဘောဆောင်သည့် ကောင်းသောဟောချက်များ မှန်ကန်၍ ၊ အနိဌသဘောဆောင်သည့် မကောင်းသောဟောချက်များ တက်တက်စင်အောင် လွဲမှားပါစေသတည်း။ …. […]
အပြောအဆိုတွေက ထမိန် ထဲကမထွက်ပဲ ရိုင်းတာကို ဂေါ်တယ်ထင်နေကြတဲ့ မိန်းကလေးငယ် တချို့ သိဖို့
ခုခေတ် ၁၅ ၁၆ မိန်းကလေးတချို့ ရိုင်းတာကို ဂေါ်တယ်ထင်နေကြတယ်…အပြောအဆိုတွေက ထမိန် ထဲကမထွက်ဘူး… ကိုယ့်နှုတ်ထွက်စကား ညစ်ညမ်းမှအထာကျတယ်ထင်နေကြတယ်အင်္ဂလိပ်စကား ညှပ်သုံးရင်တောင် What the Fuck နဲ့ Fuck You Bitch ပဲပြောတယ်…. ကိုယ့်ကိုယ်ကို တောင် တန်ဖိုးမထားတာ ဘယ်ယောက်ျားကမှလဲ ကိုယ့်ကိုတန်ဖိုးထားမှာမဟုတ်ဘူး… ! […]
ဒီလိုဖြစ်ရပ်မျိုးတွေ ထပ်မကြုံစေဖို့ ဒီပိုစ့် ကို ခွင့်ပြုချက်တောင်းပြီး ရေးပါတယ်…
ကောင်းတာ လုပ်ပေ မယ့် ဆိုးခြင်းတွေ တွဲလျက် ပါလာ တတ် တယ် ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ရက် က စွန့်ပစ်ခံ ကလေးလေး တစ်ယောက် ကို မွေးစား မိဘရှာဖွေပေး ခဲ့တယ် ။ မွေးစား မိဘလက် ထဲ ကောင်းမွန်စွာ ထည့်ပေးနိုင်လိုက် […]
အင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့ အချစ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ လူသိနည်းတဲ့ အချက်များ
စွမ်းအားကြီးမားပြီး စိန်ခေါ်မှုတွေကို နှစ်သက်တဲ့ အင်္ဂါသား၊ သမီးတွေဟာ အခက်အခဲတွေနဲ့တွေ့ရင် အရှုံးမပေးဘဲ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့သူ၊ မိသားစုအတွက် ရှေ့ကနေ မားမားမတ်မတ် ကာကွယ်မယ့်သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်အကိုင်၊ စီးပွားရေးနဲ့ ပတ်သက်လာရင်လည်း ကောင်းကောင်း ကိုင်တွယ်နိုင်ပြီး အောင်မြင်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းရှိကြတဲ့ အင်္ဂါ သား၊ သမီးလေးတွေရဲ့ အချစ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်သမျှကို […]
နှာခေါငျးအမွဲတမျးပိတျပွီး အသကျရှူကပျြနသေူအတှကျ ခကျြခငျြးပြောကျတဲ့ ကွကျဟငျးခါးရှကျအစှမျး
နှာခေါင်းအမြဲတမ်းပိတ်ပြီး အသက်ရှူကျပ်နေလျှင် ဒီမနက်ခင်းတော့ နှာခေါင်းအမြဲတမ်းပိတ်နေပြီး အမြဲလိုလို အသက်ရှူရခက်ခဲလို့ နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ဆေးထိုး ၊ ဆေးစား ၊ ဆေးသောက် လုပ်နေရတဲ့ အသိ ညီမလေးတစ်ယောက်နဲ့ စကားစပ်မိရင်း ၊ သူမ လက်တွေ့ စမ်းသပ်ပြီး သက်သာပျောက်ကင်းခဲ့တဲ့ လွယ်ကူတဲ့ နည်းလေးတစ်ခုကို မျှဝေချင်ပါတယ် ။ […]
တက္ကစီကားပိုင်ရှင် ပြောပြလာတဲ့ YBS (၄၀) ယာဉ်တိုက်မှုမှာ ဆုံးပါးသွားတဲ့ ယာဉ်မောင်းလေးရဲ့ ဘဝ . . .
တက္ကစီကားပိုင်ရှင် ပြောပြလာတဲ့ YBS (၄၀) ယာဉ်တိုက်မှုမှာ ဆုံးပါးသွားတဲ့ ယာဉ်မောင်းလေးရဲ့ ဘဝ ကျနော်တို့ ကံကောင်းပါရစေ…ကျနော်စာမရေးဖြစ်တာကြာပြီ။ Covid 19 ကပ်ရောဂါကြောင့် ကျနော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအပါအ၀င် ကမ္ဘာနှင့်အ၀ှမ်းစိတ်မချမ်းမြေ့ဘွယ်ရာဖြစ်နေကြချိန် စာရေးချင်စိတ်မရှိဖြစ်နေတာ။ ကျနော့စာဖတ်ပီးရင်လည်း အသိမိတ်ဆွေတွေက၀မ်းနည်းကြေကွဲရကြောင်း ပြန်ကြားရတော့ရေးချင်ပေမဲ့မရေးဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ အခုတော့ရေးရပါပြီ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးလေးရက်က ရန်ကုန်မြို့ ဆင်မလိုက်အနီး […]
အရမ်းချစ်ကြတဲ့ ချစ်သူတွေကိုမှ ကံကြမ္မာကြီးက လုပ်ရပ်လိုက်တာ…
ဘဝဆက်တိုင်းဆက်တိုင်းမှာညီမလေးလိုချင်နေတဲ့ သာယာတဲ့မိသားစုကိုပိုင်ဆိုင်ရပါစေလို့ May.30.2020စနေနေ့ ညနေပိုင်း5နာရီလောက် ကားတိုက်လို့ဆုံးသွားတာပါ) 19.10.2018သောကြာနေ့မှာ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ချစ်သူဖြစ်ခဲ့ကြတယ် ရန်ဖြစ်လိုက်ပြန်ချစ်လိုက်နဲ့ ချစ်သူသက်တမ်း1နှစ်8လပြည့်လာခဲ့တယ်….သူကတော့မျှော်လင့်ချက်ကြီတဲ့မိန်းခလေးတစ်ယောက်ပါ” နောက်၃နှစ်လောက်ဆို တို့နှစ်ယောက်မင်္ဂလာဆောင်ပီး ပိုက်ဆံစုကြမယ်…. အိမ်လေးလှလှဆောက်ပီးသာယာတဲ့မိသားစုကိုပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်”သူကကျွန်တော်ထက်13ရက်ကြီးပေမဲ့ သူ့ကို”အမ”လို့ခေါ်တာမကြိုက်ဘူး ”ညီမလေး”ပဲခေါ်ခိုင်းတယ်…2020 (2)လပိုင်းမှာကျွန်တော်ဦးဇင်းဝတ်ဖို့ မြန်မာပြည်ကို ပြန်လာခဲ့တယ် သူကပြန်ချင်ပေမဲ့ အိမ်မပိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်မို့ ပြန်ခွင့်မရှိခဲ့ဘူး … သူကတော့ချက်ပြုတ်တဲ့အပိုင်းမှာ တကယ်တော်ပါတယ် ဖုန်းပြောတဲ့အချိန်တိုင်း”အကိုဒီနေ့ညီမစားစရာတွေလုပ်ထားတယ် […]
မယားရှိ… ယောက်င်္ကျားတွေလင်ရှိတဲ့ …မယားတွေအသေချာ ဖတ်ကြည့်သွားကြပါ လင်ရှိတဲ့ မယားတွေမယားရှိတဲ့ဖွန်ရူးတွေ သေချာဖတ်ပါဒူးနဲ့မျက်ရည်သုတ်ရတဲ့ဘဝမရောက်ခင်ပြင်သင့်တာကိုပြင်ပါ သက္ခာ အကြောက်တရား မရှိရင်ဆက်လုပ်ချင်ရာလုပ်ကြပါသူတော်စဉ်ယောင်ယောင် လူကြီးလူကောင်ယောင်ယောင်နဲ့ကြောင် သူတော်ကြွက် သခိုးမလုပ်ကြပါနဲ့ Online သုံးပြီး အရွံဆုံးကလင်ရှာမယားရှာလင်ရူးဖွန်ရူး တွေပဲအိမ်ကညီမ အမ နဲ့ဇနီမယားကို လူများတွေကြည့်မှာကိုကြောက်တဲ့လူသဝန်တိုတတ်တဲ့လူလူများသားမယားကိုကြတော့ဘာလို့အချောင်နှိက်ချင်နေကြတာလဲ …? တိုက်ဆိုင်လို့ စိတ်ဆိုးရင် တစ်ခါတည်းBlock သွားပါ […]
မိဘကို ခွေးနဲ့နှိုင်းလို့ ကိုယ်တိုင် ခွေးဖြစ်သွားတဲ့ လပွတ္တာက မခင်လှ အကြောင်း (ဖြစ်ရပ်မှန်)
အချိန် ကား… ကောဇာသက္ကရာဇ် ၁၃၆၄ခုနှစ် – သူ့အမည်က မခင်လှ အသက်က ၁၆နှစ်/၁ရနှစ်အရွယ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အပျိုအရွယ် မိန်းကလေး ဖြစ်သော်လည်း စရိုက်က ကြမ်းတမ်းလွန်းလှ၏။ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ခြင်း မရှိ။ တစ်ဦးတည်းသောသမီး ဖြစ်သည်မို့ အလွန်ဆိုး၏။ မိခင်ဖခင်တို့အား ရိုသေကိုင်းရှိုင်းမှု မရှိ။အမြဲတစေ အော်ငေါက်ဆက်ဆံလေ့ […]
လက်ထပ်ခြင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လူငယ်အများစု စိုးရိမ် ထိတ်လန့်တဲ့ အချက်(၇)ချက်
အရွယ်ရောက်လာတဲ့ လူတိုင်းကတော့ အချိန်တန်လာတာနဲ့ လက်ထပ်ဖို့အတွက် စိတ်ကူးယဉ်လာတတ်ပါတယ်။ လက်ထပ်ခြင်းကို မရှောင်လွဲနိုင်ကြသလိုပဲ လက်ထပ်ခြင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးတွေ ပြဿနာတွေကိုလည်း ဖြစ်လာရင် ရှောင်မရတတ်တာ လောကသဘာဝ တစ်ခုပါပဲ။ မြင်တွေ့နေရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေကြောင့် အရွယ်ရောက်လာတဲ့ လူငယ်အများစုကတော့ လက်မထပ်ခင်မှာ အခုလို အချက်တွေကို တွေးပြီး စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ […]